हेल्थकेयर प्रोफेशनलका लागि प्रशिक्षण - स्कटल्याण्डका लागि नयाँ मितिहरू जुलाईमा घोषणा गरिनेछ। - इवार्ड फाउण्डेशन
हेल्थकेयर प्रोफेशनल्सका लागि प्रशिक्षण - स्कटल्यान्डको लागि नयाँ मिति जुलाईमा घोषणा गरिनेछ।
विगतका 10 वर्षको लागि, इन्टरनेट पोर्नोग्राफी हाम्रो संस्कृति र यौन व्यवहारमा बढ्दो शक्तिशाली प्रभाव भएको छ। अनुसन्धान मात्र ढिलो हुन्छ। तथापि, हेल्थकेयर प्रोफेसर अश्लील र सम्बन्धित सर्तहरूसँग बिरामीहरू र क्लाइन्टहरूमा तेज वृद्धि देखिरहेका छन्। यौन अपराधको ओभरलोडको साथ कानुनी अदालतहरू बढ्दै छन्। स्कूलहरू यौन यौन व्यवहार र घटनाहरू साक्षी छन् जुन पोर्नोग्राफीको प्रयोगमा बच्चाहरु मा प्रयोग गरिन्छ।
इवार्ड फाउण्डेशनले एक दिवसीय कार्यशाला विकसित गरेको छ जुन रयल कलेजको जनरल प्रोजेक्टनर्सद्वारा मान्यता प्राप्त गरिएको छ। कार्यशाला मार्केटको रूपमा "इन्टरनेट पोर्नोग्राफी- आज यौन सम्बन्धलाई असर र आकार दिन?"यो7जारी व्यावसायिक विकास (CPD) एकाइहरूको लायक छ। यो मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यमा इन्टरनेट पोर्नोग्राफीको प्रभावमा अनुसन्धान र उत्तम अभ्यासहरू देख्छ। यी कार्यशालाहरू जीपी, मनोचिकित्सकहरू, वकीलहरू, नर्सहरू र यौन चिकित्सकहरू सहितका सबै प्रकारका व्यवसायीहरू हुन्। यसले मनोचिकित्सक, सम्बन्ध सल्लाहकारहरू, मानव संसाधन निर्देशकहरू, शिक्षकहरू, युवा कार्यकर्ता र धार्मिक नेताहरू पनि सूट गर्दछ।
यो अन्तरक्रियात्मक एक-दिनको कार्यशालाले इन्टरनेट पोर्नोग्राफीको कम्पोजी प्रयोगको बारेमा पछिल्लो अनुसन्धानको परिचय प्रदान गर्नेछ। यसले विश्व स्वास्थ्य संगठनको अन्तर्राष्ट्रिय वर्गीकरण रोग (आईसीडी-11) को नवीनतम संशोधनलाई कवर गर्नेछ। यो यसको नयाँ "बाध्यकारी यौन व्यवहार विकार" निदान श्रेणी को विवरण।
हामी अश्लील प्रयोग र उपचार विकल्पहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारका शारीरिक स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाहरू हेर्छौं। सबै कुरा नवीनतम वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित छ। हामी सबै भन्दा राम्रो अभ्यास बारे चिकित्सकहरू बीच प्रतिबिम्बित छलफललाई प्रोत्साहित गर्नेछौं। रोगहरू र प्रयोगकर्ताहरूसँग कसरी विषय उठाउन जान्न महत्त्वपूर्ण छ, र कसरी साइन-इन गर्नुहोस् रिकभरी विकल्पहरू। सबै उपस्थित व्यक्तिहरूले गैरी विल्सनको पुस्तकको नवीनतम संस्करणको प्रतिलिपि पाउनेछन् 'तपाईंको ब्रेन पोर्नमा'।
दिनको समय तालिका
09.30 - इन्टरनेट पोर्नोग्राफी र ग्रेट पोर्न प्रयोगको परिचय। विश्व स्वास्थ्य संगठन यौन स्वास्थ्यको परिभाषा। लत मोडेलहरू र मस्तिष्क मोडेलहरू, प्रयोगकर्ता व्यवहारका ढाँचाहरू र एस्केलेशनको मुद्दालाई बलियो सामग्रीमा राख्दछन्।
11.00 - ब्रेक
11.15 - पोर्नोग्राफी प्रयोग र जोखिम - मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावहरू। किशोर, पुरुष र महिलाहरुको लागि यौन दुर्व्यवहार। साना समूह छलफलहरू, ग्राहकहरूलाई उनीहरूका पोर्नोग्राफीको बारेमा सोध्छन्, त्यसपछि सम्पूर्ण समूह छलफल। समाजमा महिला प्रयोगका ढाँचाहरू, यौन क्यान्सर र यौन व्यवहारको बदलिएको ढाँचाहरू। हामी पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू र बालबालिका यौन दुर्व्यवहारको बारेमा छलफल गर्दछौं। पछि हामी अश्लील-प्रेरित यौन दुर्व्यवहारहरू र घरेलु हिंसामा अश्लील साहित्यको भूमिकामा जान्छौं। Q & A सत्र।
14.00 - पोर्नोग्राफी प्रयोग र यौन विविधता समस्याहरू, प्रयोगकर्ता समस्याहरूको लागि परीक्षण र लचीलापन समर्थन गर्न स्रोतहरू उपलब्ध गराउने। त्यसो भए उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईएको छ। समूह छलफल।
15.30 - ब्रेक
15.45 - पुनःप्राप्ति र रोकथाम - कति अश्लील हुन्छ धेरै? उपचार र शैक्षिक विकल्पहरू। लतको निवारण के हो, निकाल्ने र 'flatlining'। कसरी ध्यान दिमाग, सीबीटी, लागू औषधि उपचार र इन्टरनेट पोर्नोग्राफीको बारेमा तपाईंको क्लिनिकल अभ्यासको बारेमा निर्माण गर्नुहोस्
16.50 - मूल्यांकन र बन्द।
भविष्यका स्थानहरू र घटनाहरूको बारेमा थप जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् info@rewardfoundation.org। वैकल्पिक रूपमा, हामीलाई + 44 (0) 131 447 5401 वा + 44 (0) 7506 475 204 मा कल गर्नुहोस्। हामी ठूलो संगठन र निकायहरूको लागि थप लागत-कुशल प्रशिक्षण उपलब्ध गराउन बेस्पपको कार्यशालाहरू पनि डेलिभर गर्नेछौं।